Kangana Ranaut oo sheegtay inay Hrithik Roshan hal arin ku cafin doonto hadii uu sameeyo! - Hablaha Media Network
Kangana Ranaut oo sheegtay inay Hrithik Roshan hal arin ku cafin doonto hadii uu sameeyo!
HMN:- Sanadii 2016 fadeexadii ugu weyneed Bollywood-ka ayaa banaanka usoo baxday kadib markii labada jilaa caanka ah Hrithik Roshan iyo Kangana banaanka soo dhigeen xiriirkii qarsoodida ahaa ee ka dhaxeeyay sidoo kalena waxba isku reebanin.
Haatan Kangana ayaa sheegtay in Hrithik Roshan ay iska cafin doonto hadii uu raali galin ka bixiyo falkii uu sameeyay sanadkii hore oo ahaa inuu jabsaday xidigtaan Email-keeda gaarka ah sidoo kalena uu kala baxay sawiro labadooda oo wada caweenayaan kadibna sawiradaas meel walbo lagu faafiyay.
Inkastoo Hrithik eedeentaas iska fogeeyay kuna tilmaamay Kangana qof madax adag sidoo kalena dhibirka ka jirin maskax ahaana isku filneyn hadaan sheekadan meel qaraar ayay tagtay sanadii hore ilaa booliska qof walbo dacwad u gudbiyo.
Inkastoo sheekadan hada la iska hilmaamay hadana Kangana ayaa dib usoo nooleesay xili ay wareysi siineesay Tv-ga lagu magacaaabo Aap Ki Adalat on India TV ayadoo markale Hrithik weerar ku qaaday sidoo kalena raali galin ka dalbatay hadii kale aysan marnaba hilmaami doono wixii uu iyada ku sameeyay.
Kangana waxay tiri “Dhibaato badan ayaan la kulmay waxaan gaaray heer aan seexan waayay sharafkeygana meel looga dhacay madaama sawiradeyda Internet-ka isaga ku faafiyay, waxaan ka dalbanaa raali galin buuxdo madaama uu xad gudub weyn igu sameeyay”
Wareysiga Aap Ki Adalat on India TV waxaa isagoo dhameestiran la daawan doonaa sabtiga nagu soo fool leh ama 2 September 2017.
Dhinaca shaqada xidigtaan waxaa u diyaarsan filimka Simran oo la daawan doono 15 September 2017 iyadana ayaa hogaamiye kowaad ka ah.